Vibes Nepal / शुक्रबार, असार ०४, २०७८ मा प्रकाशित
ब्रेक अप गर्दा आन्तरिक अशान्ति, पीडा, र कहिलेकाहिँ राहत महसुस हुने गर्छ। भावनाहरू तपाइँसँग यत्ति जोडिएको हुन सक्छ कि तपाइँलाई कसरी अगाडि बढ्ने थाहा हुँदैन। यही कारणले गर्दा यी अनसेट्टल पीडादायी भावनाहरू हुन्छन्।
यो लाज मान्नुपर्ने कुनै कुरा होइन – यो संसारमा सबैभन्दा भावनात्मक रूपमा स्वास्थ्य व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ। भावनात्मक हुनु – यस चीजहरुलाई महसुस गर्नु – मानव हुनु हो। यिनै कुराले हामीलाई मायालु, दयालु प्राणीहरू पहिलो स्थानमा बनाएका हुन्छन ।
१० ब्यवहार जस्ले ब्रेकअप पश्चात पीडादायी भावनाहरू निम्त्याउँदछ:
जे होस्, कहिले काँही तपाईंले संबन्ध काट्नुपर्दछ जस्ले तपाईंलाई ती भावनाहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। केहि व्यवहारले तपाइँलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न सक्दछ। पीडादायी भावनाहरू रोक्न तपाईंले तलको व्यवहारबाट अलग रहनु पर्छ।
१. टचमा रहनु।
सबैभन्दा खराब र भ्रामक चीजहरू मध्ये तपाईं एक गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंसँग स्पष्ट ब्रेक अप गरेपछि पनि पूर्वप्रेमीसँग सम्पर्कमा रहनु हो। यसले केही गम्भीर मिश्रित भावनाहरूको साथ साथै तपाईंलाई केही खराब छनौटहरू गर्न प्रलोभित गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले तपाइँलाई स्थितिबाट निको हुनबाट वञ्चित गर्दाछ।
जब तपाईं कसैसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुहुन्छ, यसले खास फरक पार्दैन कि कसले ब्रेक अप गरे। विगतलाई भुली अघिबढे यस्ले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्दछ अगाडि बढ्नका निमित्त। तपाईंले सास फेर्नु जरुरी छ। यो सत्य हो कि तपाईं केहि समयको लागि अवश्य भावनात्मक हुनुहुनेछ र तपाईंको पूर्वसँग सम्पर्कमा रही रहँदा तपाईंलाई ती भावनाहरूले ठीकसँग अन्य कार्य गर्न अनुमति दिदैन।
२. अस्विकारमा रहनुु।
यो सुन्न गाह्रो हुन सक्छ र बुझ्न असम्भव छ, तर तपाईंको सम्बन्ध सकियो र तपाईं अगाडि बढ्नु पर्छ। तपाईंको भूतपूर्व फिर्ता आउँदैन। यसको बारेमा इनका मा रहँदा तपाईंलाई शोक र निको पार्ने अनुमति दिदैन। तपाईं अनसेट्टल भावनाहरूको झुण्डसँग अडिनुहुनेछ।
याद राख्नुहोस् कि तपाई कसैलाई आफुसँग बस्न बल गर्न सक्नुहुन्न। यो उत्तम हुन्छ तपाईंले आफूलाई कम्ती मूल्यवान्‌ ठान्नुभएन, जो तपाईंसँग रहना चाहँदैन; त्यससँग तपाईं मात्रै किन? सम्बन्ध छोड्दा चोट पुग्छ, तर यसले तपाईलाई सहि फेला पार्न खुला छोड्छ। जे हुन्छ राम्रोको लागि नै हुने गर्दछ।
३. तपाइँका भावनाहरू अस्वीकार गर्नु।
जसरी तपाईले ब्रेकअपलाई नकार्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी नै ब्रेकअपको बारेमा तपाईको भावनाहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई शोक गर्ने र पीडाबाट पार गर्नबाट रोक्छ।
त्यहाँ कुनै कुरा गलत छैन कि तपाईं त्यस व्यक्तिसँग प्रेम हुनुहुन्छ भनी स्वीकार्नुमा र तपाईं ह्रदय भोक हुनुहुन्छ सम्बन्ध समाप्त भएको छ। तपाईंले ती भावनाहरू पार गर्नको लागि उनीहरूलाई पहिचान गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, तपाई भावनात्मक रूपले चार्ज गरिएको खराब निर्णयहरू बनाउन सक्नुहुनेछ।
४. ब्रेकअप पछि चाँडै नै डेटिङ गर्नु।
केही व्यक्ति ब्रेकअपबाट छिटो पछाडि उफ्रिन्छ जस्तो देखिन्छ र ती मध्ये केही वास्तविक रूपमा ठीक हुन सक्छ। जे होस्, संभावना ती मध्ये धेरै जसो होईन। तिनीहरू कसैसँग डेट गर्न तयार छैनन्। तिनीहरू केवल एक्लो हुन्छन्।
त्यसैले रिवाउन्ड डेटिङहरू हुने गर्दछन्। केहि स्तरमा, अर्को डेटिङले तपाईंलाई ब्रेकअप सामना गर्न मद्दत गर्दछ। जहाँसम्म, हुन सक्ने सम्भावना यो हो कि नयाँ व्यक्तिले केवल मानसपटल पल्टाइएको महसुस गर्छन् र आफ्ना भावनाहरूमा चोट पुर्याउँछन्। यसले तपाईलाई अझ नराम्रो महसुस गराउन सक्छ। तपाईं डेट दृश्यमा हिट हुनु भन्दा पहिले आफैंलाई प्रशस्त समय दिएर यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईं तयार भएपछि, तपाईं आफ्नो साँचो प्रेमको लागि खोज गर्न सक्नुहुनेछ।
५. तपाईंको पूर्वसँग दुश्मनी गर्नु।
ठीक छ, तपाईंलाई आफ्ना भावनाहरू अस्वीकार नगर्न त भनियो। जहाँसम्म, तपाईको पूर्व तिर आक्रामकता र हिंसा देखाउनु भनेर सल्लाह भने दिएको होइन। हिंसाले कुनै पनि कुराको समाधान गर्दैन।
सायद तपाईलाई लाग्छ यदि तपाई पर्याप्त पागल हुनुभयो भने तपाईको भूतपूर्वले; तपाईले उनीलाई कति माया गर्छ देख्नेछन् र तपाईसँग फर्केर आउँदछ। तर त्यो हुन गइरहेको छैन। बरु तपाई आफैंलाई खराब स्थितिमा मात्रै पुर्याउदै हुनुहुन्छ।
यसले विस्थापित भावनाहरूको सम्पूर्ण मेजबान सिर्जना गर्दछ र दुर्भाग्यवश यी अनसेट्टेल भावनाहरू वैमनस्यताको लागि ईन्धन हुन सक्छ। यो एक नराम्रो चक्र हो कि संलग्न सबैका लागि नराम्रो समाचार हो।
६. आफैलाई बन्द गर्दै।
जब तपाईं भावनात्मक रूपमा कष्टमा हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरुसँग मिसाउन गाह्रो हुन सक्छ। अन्तिममा तपाई खुशी मानिसहरू बीच रहन चाहानुहुन्छ, जसले तपाईको पीडा नभएको जस्तो व्यवहार गर्दछन्। तपाईं भीडमा पनि एक्लै हुन चाहानुहुन्छ।
यही मुख्य कुरा हो जुन तपाइँले ब्रेकअप पछि गर्नबाट जोगिनु पर्छ। साथीभाइ र परिवारका नजिक हुनु नै बिरामी भावनाहरुलाई सामना गर्ने एक उत्तम तरिका हो। तिनीहरूले तपाइँलाई तपाइँको जीवनमा भूतपूर्व भन्दा अरू धेरै बढी छ भन्ने सिकाउने छ। उनीहरूले तपाईंलाई सम्झाउँछन् कि जीवन फेरि राम्रो हुन सक्छ। जुन सर्बोसत्य हो।
एक्लो हुँदा तपाइँलाई आफ्नै भावनाहरुमा रोस्ट समयमात्रै दिन्छ। यसले पीडाबाट बाहिर निस्कन गाह्रो बनाउनछ। आफूलाई सबैभन्दा धेरै सही मानिसहरू चाहिएको बेला आफूलाई बन्दि नबनाउनुहोस्।
७. ब्रेकअपमा तपाइँको भूमिकालाई स्वीकार नगर्नु।
जबसम्म तपाईं एक अहंकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, ब्रेकअपमा तपाईंको गल्ती स्वीकार गर्नु आपत्ति मान्नुहुन्न। केही व्यक्ति वास्तवमै गल्ती गर्दैनन्, तर धेरै केसहरूमा दुबै तर्फबाट गल्तीहरू भएका हुन्छन्। तपाईंको गल्तीहरूलाई स्वीकार्दा तपाईंलाई के भएको थियो बुझ्न मद्दत गर्नु अलभा, रिकभरी हुन र फेरि कहिल्यै ती गल्तीहरू नगर्ने वाचा गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
Bदुर्भाग्यवस, यदि तपाईं ती गल्तीहरू स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भने, तपाईंमा अहंकारता बढ्न थाल्छन्। तपाईं सम्भवतः ती अनसेट्टल भावनाहरूमा पनि फस्नुहुनेछ। त्यसपश्चात हुनसक्छ तपाई कोहीसँग कुराकानी गर्नु पर्ने हुन्छ। या एक साथी, परिवारको सदस्य, वा एक चिकित्सक – जस्ले तपाईंलाई यो दोषबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नसक्छ।
८. अलग एक्लो रहन चाहानुहुन्छ।
जब तपाइँको मुटु टुटिएको महसुस हुन्छ, तपाइँलाई अलगताको आवश्यकता छ जस्तो लाग्नेछ। धेरै मानिसहरू बन्दको यो चाहानामा अडिग हुन्छन् कि उनीहरू आफ्नो जीवनमा समय खेर फाल्छन् र कहिल्यै अगाडि बढ्दैनन्। जहाँसम्म, यो उत्तम हुनेछ यदि तपाईंले बन्द गर्न को लागी यो चाहाना खेर फाल्नुभयो किनभने तपाईंसँग पहिले नै यो छ।
के तपाईंले महसुस गर्न आवश्यक छ कि ब्रेक अप बन्द छ। तपाईंको पार्टनर कुनै कारणको लागि तपाइँसँग हुन चाहँदैनथ्यो र तत्यही सत्य हो। यो मान्न गाह्रो हुन्छ, तर तपाईंको पार्टनरसँग अर्को कुराकानी गर्दा, एक अर्को चुम्बन, एउटा अन्तिम डेट, वा एक वाफयुक्त बेडरूम सत्रले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँदैन। वास्तवमा यसले तपाईलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ।
९. तपाइँको पूर्वप्रेमीका साथ पुन: प्राप्त गर्न चाहानु।
हुनसक्छ तपाई एक हुनुहुन्न जो सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहानुहुन्छ। सायद तपाई नै हुनुहुन्छ जो चीजहरू अन्त गर्न चाहानुहुन्छ तर अब तपाईले महसुस गर्नुभयो कि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो। दुर्भाग्यवस, धेरै जसो केसहरूमा यसलाई फिर्ता लिन ढिला भई सकेको हुनेगर्छ।
प्रेम एक कडा भावना हो र यसलाई बन्द गर्न गाह्रो छ। जे होस्, एक ब्रेकअप पछि, तपाइँ यि कुरा सबै जानदिनु पर्दछ र कुनै मार्ग खोज्नु पर्छ। निरन्तर तपाईंको भूतपूर्वको साथ खोज्नु, विशेष गरी जब उनले तपाईंलाई एक साथ हुनसक्ने कुनै सम्भावना नै छैन भनि स्पष्ट बताए पछि, अझै आशा गर्नुको औचित्य नै रहन्न।
आफूले माया गरेको कसैलाई छोड्नु कुनै सजिलो काम होइन। तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि एक मात्र समाधान समय हो। यदि तपाईंले अघिल्ला सुझावहरू अनुसरण गर्नुभए (विशेष गरी कुनै सम्पर्कमा नरहनु), र आफैंलाई पर्याप्त समय दिनुभए, बन्धन पनि विलीन हुँदै समाप्त हुनेछ। यो पुरानो भनाइ जस्तो छ, “दृष्टिबाट बाहिर भए, दिमागबाट बाहिर।”
१०. दमनका भावनाहरू कम गर्दै।
ब्रेकअप पछि दु: खी हुनु सामान्य कुरा हो। यो ती सबै भावनाहरू र भावनाहरूसँग व्यवहार गर्दा केहि समयका लागि दुःखी हुनु सामान्य कुरा हो। यद्यपि कहिलेकाँही उदासी अवसादमा परिणत हुन सक्छ।
डिप्रेसन भावना होईन, यो एक मानसिक समस्या हो जुन केही व्यक्तिहरू आफैंमा हल्लाउन सक्दैनन्। यसबाट बच्न तदनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। डिप्रेसन खराब ब्रेकअपबाट भावनालाई चोट पूर्यकले हुनसक्छ।
कहिलेकाँही यो निर्धारण गर्न कठिन हुन सक्छ कि एक व्यक्ति मात्र दु: खी छ वा यदि उदास छ भने। रेखा पातलो छ किनभने प्राय: डिप्रेसन सामान्य देखि गम्भीरसम्म हुन सक्छ। डिप्रेसन निदान गर्न, एक व्यक्ति कम्तिमा दुई हप्ताको लागी धेरै लक्षणहरु बाट ग्रस्त हुनुपर्दछ।
यहाँ एक चिकित्सकीय दिप्रेसेड व्यक्तिको केहि संकेतहरू छन्:
सारा दिन खाली र निराश महसुस गर्नु
तौल घट्नु वा तौल बढ्नु
बेकम्मा वा दोषी महसुस गर्नु
सामान्य भन्दा बढी बिस्तारै बोल्नु वा हिँड्नु
थकान वा कम ऊर्जा
मनपर्ने गतिविधिहरूमा चासोको कमी
आत्मघाती विचारधारा आउनु
डिप्रेसनन एउटा डरलाग्दो अवस्था हो किनभने धेरै निराश व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन्। रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) का अनुसार २०१८ मा अमेरिकामा आत्महत्या दसौं प्रमुख कारण थियो र १० देखि ३४ बर्ष उमेरका अमेरिकी नागरिकहरूमा मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण थियो। यदि तपाईं वा तपाईंले चिन्नुहुने कसैले उदासिनताका लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दैछ भने, सकेसम्म चाँडो मद्दत लिनुहोस्।
ब्रेकअप पश्चात अन्सेट्टल फेलिंगहरुमा अन्तिम विचारहरु:
मानव भावनाहरू कडा हुन्छन् – यति धेरै कि तिनीहरूले सजिलै व्यक्तिलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। यसैले ब्रेकअपको पीडाबाट छुट्कारा पाउन कठिन छ। जब तपाईं यति भावनात्मक रूपमा कसैमा डुब्नुहुन्छ र यि सबै अन्त्य हुन्छ। तपाईं निराशाग्रस्त भावनाहरूको उथलपुथल अवस्थामा पुग्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग व्यवहार गर्न कुनै तरिका भेटिदैनन्।
शुभ समाचार यो हो कि यो सबै टाढिन, माथिको दस व्यवहारलाई बेवास्ता गरी, तपाईं भावनात्मक रूपमा फेरि पूर्ण हुन सक्नुहुन्छ। आफैंलाई समय दिनुहोस्, आफैंलाई निको पार्नुहोस्, र तपाईं पहिले भन्दा बलियो भई बाहिर आउनुहुनेछ।